गायत्री साह बच्चालाई अस्तालमै गएर भेट्छिन्, तर घर लाँदिनन् किन? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । तत्कालीन सभासद् गायत्री साहले फागुन २८ गते मेडिसिटी अस्पताल भैंसेपाटीमा छोरो जन्माएकी थिइन्। जन्मिएपछि डाउन सिन्ड्रोम (जीउ नचल्ने) समस्या देखिएको भन्दै साह दम्पतीले बच्चा जिम्मा लिन अस्वीकार गरे। अस्पतालमा शिशु छाडेको पाँच महिना भयो । बच्चा परित्याग गरेको घोषणा पनि गरेका छैनन् । अभिभाकत्व कसले ग्रहण गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ।
मेडिसिटी अस्पतालका महाप्रबन्धक डा. विजय रिमालले बच्चाको अवस्थामा सुधार भई घर लैजान मिल्ने रहेको बताए। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ। ‘बच्चाको अवस्था एकदमै राम्रो छ तर आमाबुवाले बेवास्ता गर्दा समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘उसको शारीरिक परिवर्तन अन्य बच्चाको जस्तै देखिएको छ । शरीरको तौल पनि सामान्य बच्चाको जस्तै बढेको छ।’
घर जान नपाएका कारण बच्चाको मानवअधिकार हनन् भएको उनले बताए । उनका अनुसार आमाले बेवास्ता गरेपछि बच्चाले नर्सलाई आमाजस्तो मान्न थालेको प्रतिक्रिया देखाउन थालेको छ।
मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १२ को ज्यानसम्बन्धी कसुर महलअन्तर्गत दफा १८४ ९१० को प्रावधानअनुसार कुनै नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई आफूले हेरचाह वा स्याहारसम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले निजको जीउ, ज्यान खतरामा पुग्न सक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा बेवास्ता गरी छाड्न नहुने भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा अपराध संहिताले तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था गरेको छ।
कांग्रेस, राजपा र संघीय फोरमको तालमेल टुंगो आज
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल र सिट संख्या टुंगो लगाउन कांग्रेस, राजपा र संघीय फोरमले मंगलबार […]
काठमाडौं । पोलिमर नोट घोटाला प्रकरणका आरोपी तत्कालीन गर्भनर डा.तिलक रावल १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका […]
काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् निर्माणको क्षेत्रमा बद्नामी कमाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर […]
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्यो यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय
काठमाडौँ, सरकारले संविधानसभाबाट संविधान बनेको खुसियालीमा यही असोज ३ र ४ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको […]
७७ वर्षीय मन्त्रीको विवाह २४ वर्षीया दुलहीसँग
भारतको मणिपुरमा ७७ वर्षीय मन्त्रीले नर्सिङमा ग्रैजुएट २४ वर्षीया युवती विवाह गरेका छन् । मणिपुरका स्वास्थ्य […]
जनप्रतिनिधिलाई विप्लवको उर्दी: राजीनामा देऊ
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्नियुष्ट पार्टीले जाजरकोटका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा […]